RASMI: Real Madrid oo warbaahinta u soo bandhigtay saxiixeeda cusub ee Brahim Díaz – Gool FM
(Real Madrid) 07 Jan 2019. Real Madrid ayaa si rasmi ah ugu soo bandhigtay saxiixeeda cusub Brahim Díaz, saxaafada gudaha iyo tan caalamiga ah gudaha garoonka Santiago Bernabeu.
Los Blancos ayaa xili hore ku dhawaaqday in ay kala heshiisay kooxda Manchester City saxeexada ugu horeeyay ee suuqan janaayo, kahor inta uusan ciyaaryahankan u soo duulin isla maanta magaalada Madrid.
Ciyaaryahankan ayaa kasoo qeyb galay shirka jaraa’id ee sida rasmiga ah loogu soo bandhigayay saxaafada isagoo ah ciyaaryahan cusub ee kooxda Real Madrid, kadib markii si guul ah kaga gudbay tijaabada caafimaadka uu maanta ku maray gudaha garoonka Santiago Bernabeu.
Da’yarka reer Spain ee Brahim Díaz ayaa lagu soo bandhigay maanta isaga oo wata maaliyada No 21-aad ee kooxda Real Madrid, waxaana ku wehliyay munaasabadan ka dhacday garoonka Santiago Bernabeu madaxweynaha kooxda Real Madrid Florentino Perez.
Brahim Díaz ayaa muujiyay dareen ahaan sida uu ugu faraxsan yahay inuu ka mid noqdo xidigaha kooxda Real Madrid wuxuuna yiri:
“Waxaan u imid halkan, kooxda aan mar walba ku riyoon jiray inaan ka mid noqdo tan iyo caruurnimadeyda, waxaan lahaa seddex doorasho noloshayda, mida hore waa Real Madrid, tan labaadna waa Real Madrid, tan saddexaadna waa isla Real Madrid”.
Liverpool oo Khatar ugu jirta inay ka tagaan Maxamed Saalax iyo Xiddigo kale oo Muhiim ah....!!